Dhaqanka Shirkadaha - Qalabka Birta Civen (Shanghai) Co., Ltd.
Kordhi wax ku oolnimada maamulka, kor u qaad horumarka oo leh hal -abuurnimo.
Isku -dubaridka kheyraadka, xoojinta adeegyada, iyo wanaajinta tartanka aasaasiga ah ee shirkadda.
Iyada oo loo marayo tayo deggan si loo qaabeeyo sumcadda iyo sumadda; iyada oo loo marayo nidaamka siyaasadda ee sayniska ah oo wax ku oolka ah si loo wanaajiyo geeddi -socodka loona habeeyo maareynta; iyada oo loo marayo feker firfircoon si looga gudbo fikradda hore, oo leh fikrado iyo qaabab cusub oo abuuritaan joogto ah si kor loogu qaado horumarka shirkadda; iyada oo loo marayo ciyaar buuxda ee kheyraadka shirkadda u gaarka ah iyo adeegsiga wax ku oolka ah ee ilaha bulshada si loo gaaro qorsheynta iyo yoolalka shirkadda; iyada oo loo marayo macaamiisha qanacsan sida annagoo u adeegayna nafteena si aan kor ugu qaadno iskaashiga kooxda, sidaasna aan u sameyno tartankeenna asaasiga ah.
Ganacsigeenu wuxuu u heellan yahay inuu daboolo baahiyaha macaamiisheena ee agabka birta ah iyo alaabada la xiriirta, wuxuu u heellan yahay qaddarin raasumaal, wuxuuna u heellan yahay inuu abuuro alaab-qeybiye alaab heerka koowaad ah oo caalami ah.
Iyada oo leh fikrado hal -abuur leh, waxaan wajahaynaa suuqa aan la saadaalin karin oo aan kor u qaadno horumarinta meheradda iyada oo loo marayo feker firfircoon si looga gudbo fikradaha hore iyo abuuritaanka joogtada ah ee fikradaha iyo hababka cusub; iyada oo la siinayo ciyaar buuxda kheyraadka shirkadda iyo adeegsiga wax ku oolka ah ee ilaha bulshada si loo gaaro qorsheynta iyo yoolalka shirkadda; iyada oo loo marayo macaamiisha qancisa ayaa ah in la qanciyo fikirkayaga adeegga u gaarka ah si kor loogu qaado iskaashiga kooxda, sidaasna loo sameeyo tartankeenna asaasiga ah. Waxaan ku dadaali doonaa inaan u adeegno bulshada oo aan wadaagno guulaha la gaaray.
Waxaan la xiriirnaa oo aan iskaashi la sameyneynaa ruuxa xamaasadda, daacadnimada iyo aaminaadda waxaan sameyno; waxaan ka talineynaa kalsoonida iyo geesinimada inaan abuurno, hormuudno iyo hal -abuur; waxaan ku tallaabsannaa mustaqbalka iyada oo loo marayo miyir -qabka iyo ruuxa dadaalaya, soo -jiidashada iyo cabsida.
Aniga oo leh fikradda ah “maya ma yeeli karo, ma fakari karo oo keliya”, waxaan si joogto ah u jabinnaa shalay oo aan gaarnaa berri si aan u muujino qiimaha nolosheena; oo leh fikradda ah "ma fiicna, kaliya ayaa ka fiican", waxaan ku dadaaleynaa inaan sare u qaadno shaqadeena iyo xirfadeena si aan ugu soo bandhigno awooddeena aan dhammaadka lahayn.
Degdeg ah, gaaban, toos ah oo waxtar leh.
Waxaan u isticmaalnaa xawaaraha ugu dhaqsaha badan, waqtiga ugu gaaban, habka tooska ah ee wax ku oolka ah si aan u sameyno "Marna ha siin shaqada maanta berri" oo aan hagaajino kartideena.
Iyada oo ku saleysan wanaagga, waxaan ka tarjumi doonnaa qiimaheena hal -abuurnimo iyo waxqabad.
Waxaan diirada saarnaa kobcinta iyo kor u qaadida shaqaalaheena qalbi mas'uuliyad, xamaasad iyo ruux kooxeed; oo leh hawlo kaydinta tamarta, kor u qaadista tayada iyo kor u qaadista tartanka shirkadaha; iyada oo ujeedadu tahay dhammaystirka hawsha adkaynta.